Hadic Aeon, bilowgii wax walba. Muddadii ugu da'da weyneyd Dunida. | Saadaasha Shabakadda
The haic eon, sidoo kale loo yaqaan hadean ama hadean, waa mudada ugu faca weyn Dunida. Fahamsan laga soo bilaabo aasaaskii Dhulka qiyaastii 4.550 bilyan oo sano ka hor illaa 4.000 / 3.800 bilyan sano ka hor. Muddadu gebi ahaanba sax ma aha, laakiin waa xilli aan rasmi ahayn maxaa yeelay xaddidan si rasmi ah looma dejin ama looma aqoonsan. Gudiga u xilsaaran dejinta xuduudaha iyo barashada stratigraphy, geology iyo geochronology heer caalami waa Guddiga Caalamiga ee Stratigraphy.
Muddadan, oo aan la garanayn, waa isla waqti isku mid ah barta aan ka bilowno dhulkeenna. Waxaa lagu qiyaasaa in dhammaan qoraxda ay u badan tahay inay ka samaysmayaan dhexda daruur weyn oo gaas iyo siigo ah. Haic aeon sidoo kale waa mudada lagu jiro dhulka waxaa ku socda isbadalo waawayn. Duufaanadii fulkaanaha ee weynaa awgood, iyo xitaa markii Dhulka iyo meerayaasha badan ee gudaha ee qorraxda, ay saamayn baaxad leh ka heleen xiddigo waaweyn. Mid ka mid ah wuxuu ahaa Dayaxa ka soo horjeedka Dhulka (oo aan dhowaan ka soo hadalnay, gudaha xiisaha Dunida, qodobka 5).
1 Caddaymaha Hadic Aeon
2 Asalka Nolosha Dunida
3 Bilowga biyaha
3.1 Saamaynta ay ku yeelan karto nolosha
Caddaymaha Hadic Aeon
Suunka Supracortical ee Isua. Fosil-kii yaraa ee ugu da'da yaraa ee dhammaan la helay, oo taariikhdiisu ahayd 3.480 bilyan oo sano
Raadinta dhagaxyada ugu da'da weyn, waxaan aadeynaa Greenland, Canada iyo Australia. Waxay yihiin 4.400 bilyan oo sano. Dhagaxyada Hadic, oo laga helay tobannaankii sano ee la soo dhaafay qarnigii XNUMXaad, waa shakhsiyaad macdanta 'Crystal zircon crystal'. In kasta oo ay yihiin macdanta ugu da'da weyn ee la yaqaan, oo ay si hoose oo qoto dheer ugu keydsan yihiin jiingado ku yaal galbeedka Kanada iyo gobolka Jack Hills ee galbeedka Australia, kama mid ahaan qaababka dhagaxa.
Qaab dhismeedka dhagaxa ugu da'da weyn taas ayaa la ogyahay taariikh hore 3.800 milyan oo sano. Kan ugu da'da weyn ee la yaqaan waa Greenland, oo loo yaqaan "Suunka Supracortical ee Isua". Waxay xoogaa bedeleen dikes fulkaane oo dhexgalay dhagxaanta kadib markii la xareeyay. Buugga "Fikradaha ku saabsan asalka nolosha" ee Diego Sebastián González iyo Maricel Ciela Gutiérrez waxaan ka helaynaa, xog farsamo, laakiin aad u sixran, mid ka mid ah su'aalaha aan mar walba isweydiinay. Halkee nolosha ka bilaabataa? Halkaasna waxaa ku yaal, caddaymihii ugu horreeyay ee ugu horreeyay, ee suunka supracortical ee Isua, ee Hadic Aeon.
Asalka Nolosha Dunida
Faleebada Greenland waxaa ku jira qaabab bir ah oo duuban. Markii ugu horreysay waxaa la rumaysnaa inay suurtagal tahay inay ku jiraan kaarboon dabiici ah, taas oo tilmaamaysa inay aad u suurtagal tahay in meykulladii ugu horreeyay ee is-beddelaya ay bilaabeen inay jiraan. Hadda waxaa jira caddeyn hore oo sheegaya in noloshu ka timaaddo suunka supracortical Isua, oo ka yimid Galbeedka Greenland, iyo sidoo kale jasiiradaha Akilia, isla aaggaas. Waa in maanka lagu hayaa in kasta oo caddaymo cilmiyaysan laga helay aaggaas, haddana kuma tilmaami karno hore. Xusuusnow in Dhulka, kaliya maahan un sameysmay, laakiin ku dhowaad abuuritaankiisa, dhaqdhaqaaqa taarikada qaaradaha ayaa sii socday.
Qaababka dhagaxa ee ka samaysan waxay leeyihiin uruurin -5,5 oo Kaarboon ah (C) 13, C13. Tan waxaa ugu wacan bay'ada noolaha ah ee iftiinka C12 isotope doorbido. C13 ee biomass wuxuu leeyahay xoogaa -20 iyo -30, aad uga hooseeya isku-uruurinta laga helo qaababka dhagaxa. Laga soo bilaabo farsamooyinkan Waxaa la qiyaasayaa in nolosha dhulkeenna ay runti bilaabi karto 3.850 milyan ka hor sano, dhamaadka eon Hadic ah.
Waxaa loo tixgeliyaa in ka mid ah walxaha ay meeraha ku unkay, waa inay jiraan qadar cayiman oo biyo ah. Molekuyulasyadan waa inaysan ku dhicin culeyska, oo ay ka fogaadaan bartamaha, waxay ku sii jireen dusha sare. Kadib markii meerahu gaadhay 40% aasaaskeediiKuwani biyo uyuul, oo ay weheliyaan kuwa kale ee aadka u kacsan, waa in sidoo kale laga helay dusha sare, tiro aad u tiro badan oo horeba. La'aanta gaasas badan oo sharaf leh oo ay qasab tahay inay baxsadaan waa kuwo wax ku ool ah, sida helium ama hydrogen. Tani waxay keentay aaminaadda taas wax masiibo ah waa inay dhacday jawiga ugu horeeya. Mala-awaalada waxaa ka mid ah, aragtida Theia, oo aan uga hadalnay taas maqaalkii ugu dambeeyay (qodobka 5), ayaa sharaxay sababta Dayaxu u jiro sidan oo kale.
Saamaynta ay ku yeelan karto nolosha
Talooyinka ku saabsan sida biyuhu u dhaqmeen sida kalluumeysatada waxaa bixiyay Lazcano iyo Miller sanadkii 1994. Xiriirinta, ayay sharraxeen, wuxuu ka imaan doonaa wareegga biyaha iyada oo loo marayo hawo-mareenada badda hoosteeda. Wadarta waqtiga dib-u-soo-celinta waxay socon doontaa 10 milyan oo sano, laakiin dhisme kasta oo dabiici ah waxaa lagu burburin karaa heerkul ka sarreeya 300ºC. Marka, ka dib qaboojintaas tartiib tartiib ah, noole bilow ah DNA-protein heterotroph oo leh 100 kilobase genome, waxay qaadaneysaa ilaa 7 milyan oo sano si ay u soo baxaan hiddo-wadaha cyanobacterial oo leh 7.000 hiddo-sideyaal.
Waxaana jira wax aynaan odhan, oo laga yaabo inay maalin uun jawaab hesho. Maanta ayaa weli ah su'aasha weyn ee laga jawaabayo. Noloshu, inta la ogyahay, waxay ku jiri kartaa oo keliya qaab kaarboon ama silikoon ah. Adduunkeenna, waxay u jirtaa sida kaarboon, ma ahan silikoon, yaa garanaya haddii laga yaabo in meelo kale ay ku dhacdo. Laakiin su’aashu runtii waxay tahay, sidee bay noloshu u horumari kartaa haddii suurtagalnimada in waxaasi dhacayaa ay ficil ahaan aan waxba ka jirin
Waa lama huraan hadii aan ka fikirno habeenka, waxaan fiirineynaa xiddigaha. U ogolow nafteenna in lagu soo duulo fikradaha waaweyn ee soo ifbaxaya.
Kadib aeon Hadic, the Archaic eon. Haddii aad xiiseyneyso inaad ogaato sida ay u sii socotay, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Hadic Aeon